Tena matotra ... Fa maninona ianao? | Martech Zone
Talata, Oktobra 4, 2011 Alahady, Novambra 20, 2011 Douglas Karr
Miara-miasa amina mpanjifa be pitsiny be izahay ka tsy sarotra ny ankamaroan'ny asanay… tena miezaka ny mampifantoka ny mpanjifanay sy manao laharam-pahamehana ny asany izy ireo ary manatanteraka ireo paikady novolavolaina.
Fa maninona ianao no mandany vola bebe kokoa amin'ny fampielezan-kevitra maharitra fa tsy mampiasa vola amin'ny paikady maharitra?
Maninona ianao no manantena varotra bebe kokoa nefa tsy nampitombo ny fampiasam-bolanao?
Fa maninona ianao no mbola mitazona ny mpiasa amin'ny varotra nefa tsy manidy fitarihana mahay izy ireo?
Maninona ianao no mamolavola vahaolana anatiny raha afaka mividy azy io mora kokoa, haingana kokoa ary tsara kokoa?
Fa maninona ianao no manandrana mamolavola endri-javatra maro kokoa raha toa ka very ny mpanjifa amin'ireo izay tsy mandeha?
Fa maninona ianao no miantsena amin'ny mora indrindra, satria fantatrao fa tsy mora ny marikao?
Fa maninona ianao no mbola mandoa olona manavao ny tranokalanao nefa mora ny rafitra fitantanana atiny?
Fa maninona ianao no mbola manao orinasa miaraka amin'ity masoivohona ity ihany izay tsy afaka manaporofo ny ROI azy ireo?
Fa maninona ianao no mampiasa vola amin'ny fampielezan-kevitra vaovao nefa tsy navelanao hamita ilay farany?
Fa maninona ianao no manome valisoa ireo mpanjifa vaovao fa tsy ireo izay efa niaraka taminao hatry ny ela?
Fa maninona ianao no mandoa vola isan-tsindry raha tsy manivana teny fanalahidy ratsy na miatrika fitsapana samihafa amin'ny doka na pejy fitobiana aza ianao?
Fa maninona ianao no mividy tranokala vaovao izay tsy misy ny paikadin'ny finday, ny fikarohana ary ny fanovana?
Fa maninona ianao no mandoa vola hampiroboroboana ny tranokalanao nefa tsy voatsara amin'ny karoka?
Fa maninona ianao no mividy tranokala vaovao nefa tsy nanararaotra ilay farany?
Fa maninona ianao no manao doka amin'ny tranonkala hafa nefa tsy manana horonantsary samirery?
Fa maninona ianao no manandrana manome laharam-pahamehana amin'ny teny lakile izay tsy ho hitanao mihitsy ary tsy raharahanao ireo rambo lava vava azonao?
Fa maninona ianao no mifidy teny lakile izay mitondra mpitsidika an'arivony nefa vitsy fotsiny no ilainao?
Fa maninona ianao no mitady laharam-pirenena raha tsy milahatra eo an-toerana ianao?
Fa maninona ianao no miezaka milahatra tsara kokoa amin'ny teny lakile izay tsy hiova ho varotra?
Fa maninona ianao no mandinika Analytics isan-kerinandro rehefa tsy nametraka hetsika, tanjona, fanarahana ny fiovam-po, fampidirana ecommerce na fantsom-pivarotana?
Fa maninona ianao no te hilentika anaty haino aman-jery sosialy nefa fantatrao fa tsy tianao ny fiaraha-monina?
Fa maninona ianao no mivarotra amin'ny Twitter fa tsy mampiova mpitsidika ny tranokalanao?
Fa maninona ianao no mitady mpamandrika vaovao nefa maro no tsy misoratra anarana amin'ny mailakao?
Maninona ianao no mandefa ny crappy-nao isan-kerinandro mailaka fa tsy mandefa mampino isam-bolana mailaka izay mitondra valiny marina?
Fa maninona ianao no mivarotra amin'ny Facebook nefa tsy manana programa fikolokoloana mailaka?
Fa maninona ianao no mitoraka bilaogy amin'ny sehatra tsy anananao… mamorona lanja sy fahefana amin'ny zavatra tsy hahazoanao tombony mihitsy?
Fa maninona ianao no mitoraka bilaogy nefa tsy mampiroborobo ny atiny nandanianao fotoana nanoratana?
Fa maninona ianao no miasa amin'ny resume? Asa lehibe ve tsy avy amin'ny fandefasana resume intsony?
Fa maninona ianao no miasa isan'andro matahotra ny zavatra ataonao fa tsy mijanona sy manao izay tianao?
Fa maninona ianao no ao amin'ny Twitter sy Facebook fa tsy mitoraka bilaogy?
Fa maninona ianao no manomboka programa mailaka nefa tsy mandeha ny tranokalanao?
Maninona ianao no manahy momba ny tahan'ny fihenam-bidy rehefa tsy manana na inona na inona ao amin'ny tranokalanao hitazomana ny olona?
Maninona ianao no manoratra atiny bebe kokoa nefa tsy manana sarinao ao amin'ny tranokalanao akory hahafantaran'ny olona hoe iza ianao?
Fa maninona ianao no manoratra atiny lehibe sy manolotra azy amin'ny tranonkala iray halanao?
Fa maninona ianao no mandany fotoana mieritreritra ny zavatra lehibe manaraka fa tsy mahafehy izay efa anananao?
Fa maninona ianao no manandrana manao izany rehetra izany fa tsy mitady fanampiana?
Matetika aho manao vazivazy amin'ireo olona hoe mpanolo-tsaina amin'ny media sosialy aho saingy tsy dia afaka miresaka amin'ny olona momba ny media sosialy. Tena marina izany. Androany ny iray amin'ireo mpanjifanay dia vao nanomboka pejy Facebook ho an'ny orinasany… 6 volana taorian'izay nanomboka niara-niasa tamin'izy ireo izahay. Mety ho tsy tompon'andraikitra ho ahy ny filentehany amin'ny tetikady media sosialy satria tsy nanararaotra ny asa efa vitany izy ireo.
Ny tsirairay dia manery hatrany ny mpivarotra hanao zava-baovao, tsy mitovy, mampientam-po, sns… fa raha tsy misy fototra lehibe hiorenanana dia fandaniam-potoana sy vola fotsiny izany. Inona no ataonao fa tsy tokony ho ianao?
Marketing amin'ny atiny B2B: Ny torolàlana Grande avy any Eloqua
5 Okt 2011 amin'ny 6:41 PM
Doug, lahatsoratra mahafinaritra. Manontany tena fotsiny hoe inona no ampiasainao hamoronana ity fampidirana ity avy amin'ny kopia sy apetaka ao amin'ny blôginao:
Ie Copy/paste “Inona no iasanao ka tsy tokony hataonao?”
-> Mamakia bebe kokoa: https://martech.zone/marketing/seriously-why-are-you/#ixzz1ZwreWPmh”
5 Okt 2011 amin'ny 6:46 PM
Tena manara-maso ny isan'ny olona manao ny kopia izy io ary, raha mampiasa ny rohy nomena izy ireo, dia mampahafantatra anao fa niverina tany amin'ny tranokalanao izy ireo tamin'ny alàlan'ny lahatsoratra nadika! Zavatra tsara!